Faallo: Waa noocee Guddiga Fulinta EPRDF ee la Dhisay, Yeyse Diiraddu Saaran tahay? – Rasaasa News
Sep 19, 2010 EPRDF, ethiopia, ethiopian ruling party
Addis Ababa, 19-Sep-2010 – Waxaa Jimcihi tagay la dhisay gollayaashi bahwadaagta xisbiga EPRDF ee haya talada dalka Itoobiya, dhismahan ayaa ahaa mid muddo la wada dhowrayey, maadama uu ra’isulwasaare Meles Zenawi ka dhawaajiyey inay ka muuqan doonto isbadal cusub.
Shirki lagu dhisayey gollayaasha EPRDF ayaa dib loogu doortay Meles inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga, halka Hailemariam Dessalegn loo doortay inuu qabto xilka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga, jagadaas oo uu kala wareegay Addisu Legesse.
Meles ayaa dhowr jeer ku celceliyey in la badali doono masuuliyiintii kasoo qeyb qaadatay halgankii hubeysnaa ee xukunka dalka lagaga tuuray maamulki dhiig-miiradka ahaa ee Dergiga.
Haddaba, wariyaha arrimaha siyaasadda ee Wabishabeele.com ayaa isha soo mariyey liiska cusub ee magacyada Guddiga Fulinta EPRDF. Liiskan ayaanu ka garan karnaa wixii isbadal ah, islamarkaana ka sawiran karnaa jahada ay siyaasadda dalka qabaneyso mustaqbalka.
Guddiga Fulinta EPRDF, oo ah kan ugu awoodda badan siyaasadda dalka, wuxuu ka kooban yahay 36 xubnood, waxeyna afarta urur ee ku bahoobay EPRDF u qeybsadeen sidan:
Ururka qowmiyadda Tigray (TPLF) ……………………… 9
Ururka qowmiyadda Amxarada (ANDM) ………………… 9
Ururka qowmiyadda Oromada (OPDO) ………………….. 9
Ururka qowmiyadaha Shucuubta Koonfureed (SEPDF) … 9
2. Abay Woldu
3. Tsegaye Berhe
4. Abadi Zemu
9. Azeb Mesfin (xaaska Meles)
4. Ayalew Gobeze
6. Bereket Semon
8. Berhan Hailu
9. Tefera Derebew
1. Alemayohu Atomsa
4. Sufyan Ahmed
6. Girma Biru
8. Abdulaziz Mohamed
Shucuubta Koonfureed (SEPDF)
1. Hailemaruiam dessalegn
3. Redwan Hussein
4. Teshome Toga
5. Alemayehu Assefa
6. Mekuria Haile
7. Debebe Abera
8. Dr. Shiferaw Teklemariam
9. Tagesse Chafo
Yaa jooga, yaa tagay, yaase cusub?
Runtii haddaad si fiican u eegto liiskan, oo aad horey ula socotay siyaasadda dalka, wax weyn oo isbadal ah majiro. Magacyada Liiskan waxaa la dhihi karaa waa raggii meesha horey u sii joogay, marki laga reebo wax aad u yar. Bal aynu mid mid u dhexgalo afarta urur, oo aynu rogrogno xubnaha.
Sagaalka xubnood ee TPLF u soo galay Guddiga Fulinta lix kamid ah waa raggii Guddiga Fulinta horey ugu sii jiray oo meesha horey u sii joogay. Saddexda la badalay ayaa kala ah Abay Tsehaye (oo caan ka ah deegaanka Soomaalida), Arkebe Equbay (oo lagu xaman jiray inuu noqon doono ninka badalaya Meles), iyo Seyoum Mesfin (wasiirka Arrimaha Dibadda).
Haddaba saddexdan xubnood ayaa lagu badalay saddexda qof ee kala ah: Debretsion Gebre-Mikael, Beyene Mikru iyo Azeb Mesfin (xaaska Meles). Tani ayaa ka dhigan in TPLF (qowmiyadda Tigray) xubnaha ugu jira Guddiga Fulinta ee EPRDF ay markii ugu horeysay intooda badan noqonayaan kuwo kasoo wada-jeeda degmada Adwa, oo ah halka uu ka yimid Meles. Tan ayaa durba xam-xam badan ka dhex abuurtay reer Libaax San-kataabte, (reerka waa tol isjecel hoos in loo xaliyo arrintan ayaa la filayaa).
Sagaalka xubnood ee ay qeybta u heshay ANDM labo xubnood mooyee inta kale waa raggii horey ANDM ugu jiray Guddiga Fulinta ee EPRDF. Labada xunood ee la badalay ayaa kala ah: Tefera Walwa (wasiirka Kobcinta Awoodda) iyo Tadesse Kassa.
Labadan xubnood ayaa lagu soo badalay Binalf Andualem iyo Kassa Tekle-Berhan. Ragga intiisa kale waa kuwii horey ciyaarta ugu jiray.
Sagaalka xubnood ee OPDO u galay Guddiga Fulinta EPRDF waxaa iyana la badalay laba xubnood oo kaliya, kuwaasoo kala ah: Juneden Saddo iyo Aster Mammo, waxaana lagu badalay labada xubnood ee kala ah: Alemayohu Atomsa iyo Abdulaziz Mohamed.
Inta kale xubnaha OPDO ee Guddiga Fulinta EPRDF waa raggii kabtaa joogay ee muddaba siyaasadda dalka ku jiray.
Shucuubta Koonfureed ayaa sagaalki xubnood ee horey ugu matalayey Guddiga Fulinta ee EPRDF waxaa laga badalay hal xubin oo kaliya, kaasoo ah: Birhanu Adelo. Xubinkan ayaa waxaa lagu badalay Debebe Abera.
Sideedda kale ee Guddiga Fulinta ugu jira Shucuubta kala gadisan ee Koonfurta dalka ayaa waxey yihiin raggii horey meesha u joogay.
Maxaa la fili?
Dadka siyaasadda dalka aad ula socda waxey filayeen in isbadal culus lagu sameyn doonto Guddiga Fulinta ee EPRDF, taasoo dhabaha u xaadhi laheyd isabdalkii siyaasaddeed ee uu ra’isulwasaare Meles Zenawi ka dhawaajiyey dhowrka jeer.
Meles ayaa horey u shaaciyey inuu doorkan wixii ka danbeeyaa ka dagi doono jagada ra’isulwasaaraha dalka, isagoo sheegay in shantan sano gudahood uu tababarayo ciddii isaga badali laheyd.
Maadaama aynan liiska Guddiga Fulinta ka muuqan wajiyo cusub oo badan, dad badan ayaa isweydiinaya, maxaa xiggi doona? Awoodda siyaasadda dalka sidey noqon doontaa mustaqbalka? Haddey noqoto inuu Meles nasto, yaa badali doona?
Markaad eegto liiska magacyadan waxaa ka maqan oo meesha laga saaray Arkebe Equbay, oo ay Meles isku deegaan kasoo wada jeedaan. Arkebe ayaa in badan la sheegi jiray inuu badali doono Meles mustaqbalka, waxeyna intii hore ahaayeen labo nin oo aad isugu dhaw, in kasta oo ay dhawaanahan kala caro-gadisteen.
Ninka labaad ee la sheegi jiray inuu badali doono Meles ayaa ah Dr.Tewodros Adhanom, oo asne ay Meles isku deegaan ka yimaadeen. Dr. Tewodros waa wasiirka Caafimaadka dowladda dhexe, wuxuuna ka socdaa dhanka xaaska Meles (Azeb Mesfin), oo iyana ah siyaasiyad firfircoon, haddana soo gashay Guddiga Fulinta ee EPRDF (maxaad tiri?).
Inagoo eegeyna balanqaadkiisii (Meles), waxaanu qiyaaseynaa inuu ka dagi doono jagada ra’isulwasaaraha dalka isagoonan dhameysan shanta sano (qiyaasti afar sano kadib), si uu Dr. Tewodros xilka ra’isulwasaare ula sii qabsado kahor doorashooyinka dhici doona shan sano kadib.
Dr. Tewodros kadib, siyaasiyiinta aynu isha ku heyno ayaa waxaa kamid ah xaaska Meles (Azeb Mesfin), oo ay suurogal tahay in jago heer wasiir ah loo magacaabo, haddaan hadda loo magacaabinna, uu magacaabi doono ra’isulwasaaraha xigga.
Sidoo kale, waxaanu il-gooni ah ku eegeynaa Redwan Hussein oo ah siyaasi ka soo jeeda Shucuubta Koonfureed. Redwaan wuxuu ku jiraa Guddiga Fulinta wuxuuna sanadkan la soo baxay daf-daf xooggan, isagoo noqday siyaasi aad loo wada eegayo.
Redwan waxey u badan tahay inuu noqdo ninka labaad ee dalka ugu awoodda badan, waxeyna u egtahay inuu ra’isulwasaare Meles Zenawi u wato booska Bereket Simon, oo isaga markale soo galay Guddiga Fulinta, balse u muuqda nin daalan.
Ugu danbeyntii, Guddigii Fulinta EPRDF la dhis, isbadalkii la sheegayey sidii loo yiri muunan noqon. Meles wali wuxuu taagan yahay doorkan wixii ka danbeeyaa waa iga bas. Haddey dhacdo inuu odayga nasto, mar haddey Arkebe Equbay xaadhatay, waxeynu diiradda saarnaa waa saddex qof uun: Dr.Tewodros Adhanom, oo koofida la wareegaa, Azeb Mesfin iyo Redwan Hussein, oo noqdaa labada hal-bowlaha u noqda siyaasadda dowladda cusub.
Qaar ka Mid ah Wufuuda ka Qayb Galaya Shirarka Nabada oo ka Cabanaya Deg Deg iyo Wakhti Xumo